Ikhosi ye-QGIS 3 inyathelo ngenyathelo ngenyathelo ukusuka ekuqaleni-iGeofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/Ikhosi ye-QGIS 3 inyathelo ngenyathelo ngenyathelo ukusuka ekuqaleni
Ikhosi ye-QGIS 3 inyathelo ngenyathelo ngenyathelo ukusuka ekuqaleni
Ikhosi ye-QGIS 3, siqala nge-zero, siya ngokuthe ngqo kwinqanaba de sifike kwinqanaba eliphakathi, ekugqibeleni kunikezelwa isatifikethi.
Iinkqubo zoLwazi lweJografi QGIS, sisifundo esenziwe phantse ngendlela esebenzayo. Idibanisa ubuncinci benqaku lethiyori elivumela abafundi ukuba baseke ulwazi lwabo kwi-GIS, kuba ayonjongo yokudlulisela ukufunda ngoomatshini, kodwa endaweni yoko lubanzi.
Le khosi i-100% elungiselelwe ngumdali "weblogi kaFranz - GeoGeek", ibandakanya ukuzivocavoca kwiklasi nganye eyifaneleyo.
Intshayelelo kwikhosi yeprogram
Iingcebiso zama-Hispanics eziya e-USA